KASHIFAAD: Villa Soomaaliya oo wada qorshe lagu ilko tirayo Ahlu Sunna -News and information about Somalia
Home Warkii KASHIFAAD: Villa Soomaaliya oo wada qorshe lagu ilko tirayo Ahlu Sunna
KASHIFAAD: Villa Soomaaliya oo wada qorshe lagu ilko tirayo Ahlu Sunna
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dardargelisay qorshe balaaran oo ay ku ilko tireyso ururka Ahlu Sunna Waljameeca.
Qorshahaas oo meel gabagabo ah maraya ayaa waxa uu yahay in ay la wareegto dhamaan xubnaha urur diimeedkaas.
Wararka ayaa sheegaya in qorshahaan si gaar ah loogu beegsan doono Macalin Maxamuud oo liddi ku ah Villa Soomaaliya.
Dagaalameyaasha Ahlu Sunna ayaa haatan waxaa lagu qiyaasayaa in ka badan 500 xubnood, kuwaas oo hubeysan.
Talaabaddan ayaa kusoo aadeysa xili Nabad iyo Nolol ay dooneyso in ay natiijo fiican ka hesho doorashadda maamulka Galmudug.
Previous articleSoomaalida ku nool Nairobi oo $500,000 kun oo Dollar ugu deeqay fatahaadaha
Next articleXOG: DFS oo go’aan ka qaadatay in Jidadka loo xiro soo dhaweynta wasiiro Itoobiyaan ah
Wasiir Cawad oo ka jawaabay Warkii Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya. &...